यस्तो छ नयाँ मन्त्रीमण्डल, को-को बने नयाँ मन्त्री ? [सुचीसहित] « Postpati – News For All
यस्तो छ नयाँ मन्त्रीमण्डल, को-को बने नयाँ मन्त्री ? [सुचीसहित]
मंसिर ४, काठमाडौं । मन्त्रीमण्डल हेरफेरको लामो हल्लापछि आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको निम्नानुसार नियुक्ति, कार्यविभाजन र हेरफेर गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आठ जना मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर आठ मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ, लालबाबु पण्डित, थममाया थापा, चक्रपाणि खनाल, मातृका यादव र गोकर्ण विष्टलाई मन्त्रीबाट हटाइएका छन्।